Ndezvipi mazano aSEO angakwanisa kukurudzira mazamu enyu kuti ave webhupu yepawebsite
Nzvimbo yepaiti ndiyo inowanzobatsirika yekufambisa panzvimbo yako, uye inobatsira zvakananga pawebsite uye ushandisi. Sezvo vashandisi vanoona nehutori hwebhuku rinotorwa neGoogle sechinhu chakakosha chekuita, iwe unofanirwa kugovera kune chinhu ichi chekushandisa webhusaiti. Saka, kana uri kushamisika kuti sei nzvimbo yako isingashande zvakanaka, inguva yekutora zvakaoma pamhando dzakasiyana dzekufamba kwaunako. Kana nzvimbo yako yakaita seyakanaka, hazvirevi kuti zviri nyore kufamba. Kana vatenzi vako nevanogona vatengi vasingakwanisi kuwana nzira yavo pedo newebsite kana zvimwe zvigadzirwa zvavari kutsvaga, unofanirwa kugoverazve patsva kana kuti nyore nyore nzvimbo yako yekutsvaga. Ichakubatsira iwe kuti uvandudze mararamiro ako uye kusimudza kutendeuka. Pasina kambani yekugadzirisa menyu, webhusaiti yako SEO inogona kunge isina maturo. Iwe uri pangozi kuti ugovhiringidza vashandi vako vanogona uye uite kuti vaende kumakwikwi webhupu yako. Muchidimbu ichi chinyorwa, uchawana mazano anobatsira ekugadzira zvakanakisisa webhusaiti yezvokufambisa navigation menu nekuvandudza nzvimbo yako SEO.
Iwe webusaiti yeSeO kuvandudzwa
) Iro rinofungidzirwa kuti webhusaiti inofanira kuva nemimwe yemenyu. Zvose mawebsite ezuva ranhasi anofanira kunge ane ruzivo rwakakosha rwekubatanidza mubhuku repamusoro pawebsite. Aya mazano anofanirwa kuratidza nzvimbo yakagadziriswa uye inoita kuti vashandi vape kamwechete zvavanoda. Muzviitiko zvizhinji, e-commerce web web sources ane mapurisa maviri emenyu. Yokutanga inonyanya kutaura nezvekufamba nemazita epaiti uye zvikamu, asi imwe bhari inosanganisira mabhizimusi emamwe mapeji akadai sehuwandu hwemagariro evanhu kana mabhadharo ezvinyorwa. Ndinokukurudzira kuti urege kuisa zvinhu zvose mumutambo mumwe chete. Kana zvisina kudaro, menyu yako yepamusoro ichava nehurombo hwekuratidzwa kwechimiro chako. Paunenge uchigadzira webusaiti yako yekutsvaga navigation, iwe unofanirwa kuisa pfungwa pazvinyorwa zvakakosha uye zvakakosha uyewo pane zvinangwa zvebhizimusi rako. Somuenzaniso, kana iwe uchida kuti vatengi vako vakuudzei ne-mail kana nhamba yefoni, shandisa "Contact" link mune imwe nzvimbo yepaiti.
Sarudza zvigaro zvakakosha
Kuvandudza nzvimbo yako yeSOO, unoda kusarudza mabhatani achazobatsira zvikuru potential customers. Kuti usarudze mabhatani akakodzera, iwe unofanirwa kuitisa tsvakurudzo, uchichera muwebsite yako ye analytics uye ugoona mapeji anonyanya kudiwa nemushandi. Ita kuti zviratidzo zvakadai se "Kutsigirwa Kwevatengi," "Raira mukunyorera kumwe," "Bhura," "Portfolio" nezvimwe. yakagadzirirwa pane yako huru webhupu yemenyu yebhuku. Kuiswa kwakashata kwezvikwangwani izvi kunogona kukanganisa bhizinesi rako uye kukurisa kuwedzera kwehuwandu. Kuti uone kuti iwe unokwezva vashandisi nemabhatani akakodzera, unofanirwa kudzokorora kufarirwa kwezvese yako eseyo anoshandiswa kushandisa heatmaps Source .